ရွှေဖြူးလေး: January 2012
သံသရာ အထဲက ဒါန
လူ့ဘ၀ကို ဘာတွေလုပ်ဖို့ လာကြသလဲ..?
ဦးဇင်းတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ “ဒါန”ဆိုတဲ့စကားလေးကို ဦးဇင်းတို့ ကလေးဘဝလူမှန်း သိတက်စ အရွယ်က တည်းက ကြားဖူးခဲ့တာပါ။ တချို့သော လူတွေကလည်း ဒါနကို အထင်ကရကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ပြုလုပ်လှူဒါန်းနေကြသလို တချို့ကျပြန် တော့လည်း ကိုယ်ဒါနပြုလုပ်လိုက်တာကို ပြုလို့ပြုမှန်း မသိရလောက်အောင် အမှုမဲ့ မမှတ်မဲ့နေ နေကြပါတယ်။ ဒါနဆိုတာပါလဲ?။ ဦးဇင်းသိသလောက် ပြောပါရစေ။ ဒါနဆိုတာ မိမိမှာရှိသော အရာဝတ္တုပစ္စည်းအပ်ါမှာထားတဲ့ တဏှာ၊ စွဲမတ်မှု၊ တက်မတ်မှုတွေကို ဖြတ်တောက်တာပါ။တစ်နည်းအားဖြင့် ဒါနပြုတာဟာ မိမိမှာ ရှိတဲ့ လောဘကို သတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပေးကမ်းလိုသော စေတနာဖြင့် ဒါနပြုနေချိန်တွင်ဒါနပြုသူ၏ စိတ်ထဲမှာ အလောဘစိတ်နှင့် အမစ္ဆရိယစိတ်တို့ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒါနဟာ မိမိရဲ့လောဘကို သတ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတာပါ။
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 6:01 AM No comments:
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 9:08 PM No comments:
ဦးဇင်းတို့တွေသည် အသိဉာဏ်ပညာ ရှိသော၊ ဝေဖန်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိသော လူ့ဘ၀၊ လူ့လောကကြီးမှာ နေထိုင်ကျင်လည် နေကြသူတွေပါ။ ဒီလို လူ့ဘ၀ကို ဘာတွေလုပ်ဖို့ လာကြသလဲ..? ဘာကိစ္စနဲ့လာကြသလဲ..? ငါကတော့ အင်မတန် ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကို ရောက်လာခဲ့ပြီ ငါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ..? ငါ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ..? စသဖြင့် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် စမ်းစစ်သင့်တယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။ `ဤလူ့လောကကို ဦးဇင်းတို့ ဘာကိစ္စနှင့် လာကြပါသလဲ´လို့မေးလျှင်၊ အောက်ပါအတိုင်း အဖြေ(၄)မျိုး ရရှိပါလိမ့်မယ်။
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 5:05 AM No comments:
တိဟိတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးအနက်ကတော့ တိဆိုတာ သုံး၊ ဟိတ်ဆိုတာ ဟောတု အကြောင်းရင်း အခြေအမြစ်။ ဒါကြောင့် တိဟိတ်ဆိုတာ အကြောင်းရင်း အခြေအမြစ်သုံးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။
အကြောင်းဆိုတာကတော့ ဒီဘ၀မှာ ဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းက ကျွတ်လွတ်နိုင်တဲ့၊ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အကြောင်းကိုပြောတာ။ အဲဒီသုံးပါးပြည့်စုံရမယ်ပေါ့။ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ ကျွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလျှင် လောကီရော၊ လောကုတ္တရာရော ထွန်းပေါက်အောင်မြင်သူဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 9:58 PM No comments:
ဓားမ,ဟာ မသွေး မခုတ်ဘဲ ပစ်ထားလျှင် သံချေးတက်၍ အသုံးမ၀င်သော ဓားတုံးပဲ ဖြစ်မည်၊ မိမိ ဦးနှောက်၊ အတွေး၊ အသိပညာများကို အသုံးမချဘဲ ပစ်ထားလျှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးပြောသလို Idea to Action မဖြစ်ဘူးဆိုလျှင် ဦးနှောက် ချေးတက်သွားနိုင်သည်၊ စမ်းရေ ချောင်းရေတို့သည် တသွင်သွင် စီးလျှက် လှုပ်ရှားနေမှသာလျှင် ကြည်လင်သော ရေဖြစ်နိုင်မည်၊ အလားတူပင် များများတွေး များများ ရေးပြီး ဦးနှောက်ကို များများ အလုပ် ပေးနေမှသာလျှင် အသိပညာများလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး အတွေးသစ် အမြင်သစ်များ တီထွင် ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏ ကလောင်ဓားကို သွေးလိုသော မိမိ၏ ဦးနှောက်ကို လှုပ်ရှားမှုများ ပေးလိုသော ကလောင်ရှင်များကို အောက်ပါ စာစောင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က ကြိုဆိုနေပါသည်။
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 8:38 PM No comments: